Ukuxoxisana no-Ángel Delgado, umbhali wezincwadi ezimbalwa ezizimele | Izincwadi Zamanje
Ukuxoxisana no-Ángel Delgado, umbhali wezincwadi eziningi ezizishicilele
UCarmen Guillen | | Izingxoxo, Literatura
Kusuka Izincwadi Zamanje siye sananela ngezikhathi ezithile "inkinga" abanye ababhali abanayo lapho beshicilela izincwadi zabo kanye nesibindi esikhulu abasisebenzisayo uma kukhulunywa ngokuzishicilela. Kungakho namhlanje sino-Ángel Delgado, umbhali obezishicilela iminyaka embalwa futhi esenezincwadi ezimbalwa emakethe.
Uma ufuna ukwazi ubuhle nobubi bokuzishicilela ngokwakho, sikunikeza mathupha.
I-Actualidad Literatura: Okokuqala Ángel, sithanda ukunibonga egameni lethimba lonke le-Actualidad Literatura ngokuvuma le ngxoxo ngenjabulo. Kuyintokozo kithi sonke.
Nami futhi, ngiyabonga ngokucabanga ukuthi ukuvula idilowa edeskini lami kuzoheha abafundi bakho. Kuyangijabulisa ukuchitha lesi sikhathi esincane nawe.
AL: Ángel, ngabe ngikhuluma nawe phakathi nale ngxoxo ngegama lakho siqu noma unalo igama-mbumbulu ozizwa ukhululekile ngalo?
IMP: Angikaze ngicabange ngamagama mbumbulu, negama lihle, ngiyabahlonipha bonke labo bantu abakhetha 'amagama obuciko' ngoba banamagama nezibongo ezijwayelekile kepha angikaze ngicabange ukushintsha elami ukuzama ukuzenza ngaziwe kule adventure ukuzama ukushicilela izincwadi. Yize manje usuyikhuluma, ngicabanga ukuthi uma ngelinye ilanga ngibhala okuthile okwesabekayo futhi okuyinhlekelele, yebo. Ngabe ucabanga ukuthi kufanele ngabe ngicabanga ngokushintsha igama lami manje, noma ngisho nedolobha lami? (ehleka)
AL: Angikaze ngiyicabange nganoma yisiphi isikhathi, ngiyathembisa (ehleka). Uthando lwakho lokubhala luzalwa kanjani kuwe? Ngabe bekuyinto oqale ukuyithanda kusukela usemncane noma mhlawumbe ufunde iZincwadi futhi lapho kuvela ingxenye enkulu yokuzilibazisa?
IMP: Yebo, njengoba ngikhumbula ukuthi ngangikuthanda ukudweba izinhlamvu kakhulu kunezinombolo kulezozincwajana zeRubio abasiphoqa ukuba sizigcwalise. Ngendlela, ngolunye usuku ngenhlanhla ngabona izinhlelo ezintsha zalezozincwadi zokubhalela futhi azihlangene ngalutho nalabo abavela kuma-80s, balahlekelwe yikho konke okushiwo yibo. Indaba yami yokuqala yangempela (ngoba nganginamacebo amaningi ngisemusha) yayinesihloko esisodwa Amaconsi egazi, engangihlanganyele nayo emncintiswaneni wokubhala ezikoleni. Njengoba ngangivame ukudlala imidlalo yokulingisa ngiseyingane, ngine-tints ezinhle, bengihlala ngakha izindaba noma imibhalo ephepheni, engangiphenduki izindaba. Kamuva ngathola iziqu ku-Art, futhi yebo, inakho konke okuphathelene nezinhlamvu, kepha hheyi, lokho akuhlangene kangako nomsebenzi wokuzilibazisa wokubhala, ngangivele ngilume isinambuzane ngaphambi kokunyathela ubuhlakani.
AL: Ngokungazisa kancane ngawe, ngifunde ukuthi ungowaseCádiz. Kungashiwo yini ukuthi iCádiz enhle, amabhishi ayo, imigwaqo yayo, abantu bayo, bake basebenza njengogqozi lwakho?
A: Impela, futhi noma ngubani othi idolobha labo noma imvelaphi yabo ayikuthonyanga abakubhalayo, ulele ngendlela embi (ehleka). Ngokuzimisela, yilokho okushoyo, bengingasho okuningi ngeCádiz, ngoba imigwaqo yayo nayo iyiphunga lomhlaba, izingoma zayo nezinkondlo zayo. Futhi amabhishi ukukhanya kwawo, nemimoya yawo. Nginenhlanhla yokuthi ngisuka endaweni engasogwini, futhi ngihlale kuyo, lapho ama-horizons ahlanzekile eyithuba eliyingqayizivele lokuvula nokuvula lawo 'mabhulokhi' engihlupheka kwesinye isikhathi, uyazi, lawo okuthi noma ngabe ufuna ukubhala okungakanani indaba emnandi, ungaphumi, ungahlali, noma umile, noma uhamba. Kepha, kimi, ukuhamba ebhishi elingenalutho kuvula umnyango oya ethubeni lokuqala okuthile okusha, ngazo zonke izindlela.
AL: Useneminyaka ubhala kubhulogi lakho lemibhalo iScriptoria (http://scriptoria.blogspot.com.es/), iqiniso? Yazalwa kanjani futhi kungani unqume ukuyibiza kanjalo? Igama lewebhusayithi yakho lingikhumbuze incwadi eningi eyisimanga u-Auster ayibhalile ethi, "Travels through the Scriptorium."
A: Kuyiqiniso, leyo bhulogi ivulwe iminyaka engaphezu kwengu-7, futhi iqiniso ukuthi ngangijwayele ukubhala okuningi kuyo ngaphambili. Ngendlela yokuxhumana nabantu, le mpumelelo kubhulogi iye yahlehliselwa ekusakazweni okuhle ngamunye anakho kumaphrofayli abo, ku-Facebook naku-Twitter ikakhulukazi. Angikwazi ukukhononda ngakho, ngisenokuvakashelwa kwamakhulu lapho ngishicilela okuthile, noma ngabe imibono kubhulogi uqobo yehlile. Incwadi kaPaul Auster ngokuqinisekile kungaba yisihloko esihle kubhulogi lami. Kepha Isikripthi Iqale uhambo lwayo ngoba kuyo bengifuna ukuveza izinkinga nokuphazamiseka okuqubuke ngesikhathi sokuphothula inoveli ebengiyibhala ngalowo nyaka. Kancane kancane, ngabeka inoveli eceleni ngase ngiphendukela ekubhaleni izindatshana ezintsha nezindaba kubhulogi, lapho nje ngibona ukwamukelwa eyayikuthola. Ngikubizile Isikripthi ngoba bengifuna ukukhetha igama, igama elilodwa, eliqukethe izinto eziningi futhi elizodonsela ukunakwa ngandlela thile. Ukuba ubuningi besiLatin be ideskithophu kwabonakala kuphelele kimi.
AL: Ngibonile ukuthi uthando lwakho lokubhala alukhonjiswa kubhulogi lakho lezemibhalo kuphela, kodwa nokuthi uke wazibophezela nomhlaba onzima wokuzishicilela. Sitshele okuncane mayelana nokuthi yiziphi izincwadi onazo ezithengiswayo nokuthi ngayinye yazo imayelana nani.
IMP: Yilokho nje, ukuzishicilela ngokwakho kunesibindi, futhi kuyinto enhle futhi enengekayo (iyahleka). Endabeni yami, ngiqale ngazama ukubhala okufushane kakhulu kweqoqo lezinkondlo engingasenawo amakhophi azo. Kepha ngisenawo amakhophi we I-Scriptoria, idilowa lokuqala, eqoqa izindaba zeminyaka eminingana yebhulogi futhi ezimbalwa ezingashicilelwanga, nazo ezivela ku- Wonke amawashi aphukile, i-anthology yezindaba nezinganekwane zazo zonke izinhlobo lapho ukuhamba kwesikhathi noma ukulahleka kungumugqa oyinhloko wesakhiwo, futhi Ukwehla ngeshwa kukaHenry Norton, inoveli eyimfihlakalo ehlekisayo engiyishicilele kulo nyaka futhi engibe nayo ukubhala okuningi okumnandi, ngoba ibingahlangene nezindaba engivame ukuzibeka kubhulogi noma kwezinye izincwadi. Futhi ngefomethi yedijithali ingatholakala ku-Amazon Wonke amawashi aphukile, Indoda engenawo amagama, okuyindaba ekhetheke kakhulu kimi, futhi Umkhuleko wasekuseni wabashushisiwe nje, indaba ende yemfihlakalo yangenkathi ephakathi engayibhala eminyakeni engaphezu kwengu-20 edlule. Ngiyethemba ukuthi inguqulo ye-ebook kaHenry Norton itholakale ngo-2015.
AL: Ángel, ingabe kunzima kangaka namuhla ukwenza umshicileli abone inoveli yomuntu bese ethatha isinqumo sokuyishicilela? Zama ukubala okuncane okunengqondo bese usitshela ukuthi bangaki abashicileli osuye kubo nemisebenzi yakho ngaphansi kwengalo yakho.
IMP: Eminyakeni embalwa edlule ngadlula ohlwini lwabashicileli ababhalisiwe ekhasini loMnyango Wezamasiko. Futhi-ke, ake sithi ngibe 'indoda egaxekile' ngokuthumela iziphakamiso futhi ngibhalele labo ebengicabanga ukuthi bangaba nentshisekelo kulokho engikubhalile, ngemuva kwezinyanga ezimbalwa 'owesilisa ogaxekile othokozile' wayesenuka 'isidumbu sogaxekile' (uyahleka ). Abanye abashicileli bangicebisa ukuthi ngishicilele nabo ukuze ngikhokhele amakhophi, bengilokhu ngikwenqaba lokho. Kodwa-ke, ngike ngezwa izindaba zabantu abenze imizamo emincane kakhulu ekusesheni noma ekuhambiseni umbhalo wesandla kubashicileli abambalwa abathole inhlanhla engcono kunami. Okwenza umuntu acabange ngezinto ezimbalwa: noma ngabe angikwazi ukubhala kahle futhi inkani yami ingakwazi (ukuhleka), noma lawo ma-imeyili engivame ukuwathola akhombisa ukuthi engikubhalayo akuhambisani nanoma yimuphi umugqa wokuhlela kuzoba yiqiniso. Njengamanje ngikuyekile ukuthumela okwangempela, ngishicilela izincwadi zami ngedwa.
AL: Yiziphi izinyathelo zenqubo yokushicilela ideskithophu omncane futhi ojabule kakhulu ngazo?
A: Okuncane: lapho kufanele wenze izinguquko ezincane kusakhiwo futhi azigcini isikwele. Angiyena umqambi wezakhiwo oqeqeshiwe futhi ngichitha isikhathi esiningi kakhulu ngenza lezo zinguquko. Uhlupho, wow. Futhi engeza ukusatshalaliswa, kuzodingeka ngisebenzise umzamo nesifiso sokuhambisa amakhophi ezitolo ezidayisa izincwadi noma izinsizakalo zokuthengisa, into engingakwazi ukuyenza.
Yizona eziningi kakhulu: bhala. Futhi ikakhulukazi izikhathi ngemuva nje kokuphothula ukubhala incwadi, zokwazi ukuthi isiqediwe futhi ufuna ukuthi abantu bayifunde bese bekutshela ukuthi baxhumene nendaba, noma ukuthi bayayizonda nokuthi kufanele ngiyikhokhe i-psychoanalyst ukukhohlwa incwadi yami (ehleka).
AL: Uma namhlanje omunye wabafundi bethu ethatha isinqumo sokuthemba wena nezincwadi zakho, kufanele baye kuphi ukuyothenga ikhophi?
A: Ngithembe? Uqinisile? (ehleka) Cha, ake sibone ... kulula kuwe, kufanele ungibhalele i-imeyili (angel.delgado@gmail.com) engicela amakhophi. Uyabona ukuthi ngangithini? Uziro ekusatshalalisweni (uyahleka). Futhi bangafinyelela kusixhumanisi Thenga izincwadi zami kubhulogi Isikripthi, lapho ngivumele khona isitolo esincane esibonakalayo esinezinkinobho zokuthenga. Vele, ezinye zingathengwa ku-Amazon ngohlobo lwayo lwedijithali. Kepha, isibonelo, I-Scriptoria, idilowa lokuqala y Ukwehla ngeshwa kukaHenry Norton zisephepheni kuphela.
AL: Ángel, sithanda ukubuza bonke esixoxwe nabo umbuzo wokugcina ofanayo ukuze sibone umehluko ezimpendweni osinika zona. Lapho kuyahamba: Yiluphi uhlobo lwemibhalo okhululeke kakhulu kulo, yiziphi izincwadi zakho ezintathu ozithandayo, futhi yimuphi umlobi odumile ocabanga ukuthi bekungafanele abe ngumlobi? Futhi sengeza okungeziwe: i-E-book noma iphepha?
IMP: Yebo, yize engikushicilele kungaholela ekucabangeni ukuthi ngizijabulela kakhulu izindaba nezindaba, kufanele ngikutshele ukuthi nginesikhathi esingcono sokubhala amanoveli, noma ngabe okugqokile kukhulu, kepha uzizwa umkhulu uma ufaka ukuphela kwayo.indaba yendaba yamakhasi angaphezu kwamakhulu amabili. Anginazo nje izincwadi ezintathu eziyizintandokazi, niyazi… Kepha uma kufanele ngithathe ezintathu njengamanje, khona manje, yilezi: Indatshana ngobumpumputhe, Firmin y Inhliziyo efriziwe. O, futhi ngaphandle kokungabaza, uDan Brown kufanele ngabe ubhalisele amakilasi e-paddle tennis noma yini ayifunayo esikhundleni sokuthatha ipeni nephepha. Ukuhlala uthatha incwadi yamaphepha ohambweni nokunye okuse-ebook, ekhaya njalo, njalo, njalo ... iphepha.
AL: Hhayi-ke, njengoba ngikutshelile ekuqaleni, kube yintokozo ukuba nawe ngale thisngel. Futhi ngiyabonga ngesipho sakho sencwadi yakho yakamuva "Ukwehla ngeshwa kukaHenry Norton." Ngiyaqiniseka ukuthi ngizoyithanda. Nakisisa kakhulu ukubuyekezwa ukuthi kusuka ku-Actualidad Literatura sizomenza ngaye. Ngibonga kakhulu ngakho konke futhi nivalelise.
A: Siyabonga kuwe. Uma ucabanga ukwehla kweNorton ngempela, kuyadabukisa kakhulu, ngaso sonke isikhathi unesikhathi sokulahla ukubuyekezwa bese uphonsa emnyango wami ngesinqe sokunqunywa ukungicela izincazelo (ukuhleka), ukuvimbela lokho kungenzeki kungcono ngikucele aphoyintimenti nodokotela wami wezifo zengqondo. Sizobonana maduze.
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » Izingxoxo » Ukuxoxisana no-Ángel Delgado, umbhali wezincwadi eziningi ezizishicilele
Yonke inhlanhla emhlabeni ku-Ángel Delgado kuleli zwe lemilingo lokuxoxa nokuxoxa izindaba. Ngizoqala i-adventure yami nawe futhi ngizofunda, Umkhuleko wasekuseni walabo abashushiswa nje
Buyekeza: 'Inhliziyo ye-condor', nguFrancisco Núñez Roldán
I-New Illustrated Edition yeStoker's Dracula